I-Ministries ye-intanethi - Uboniso lwePulpit
UMarko usebenze njengoMphathiswa wePulpit kwiCawa yaseKristo yaseAustinville ukususela kwi1994. Unemigangatho evela kwiYunivesithi yase Freed-Hardeman, iYunivesithi yeLipscomb kunye neReformed Seminary. Ngethuba eFHU, wayengummkeli we-Guy N. Woods ukufundiswa. Ufundise iikholeji zeBhayibhile izifundo kwi-Bear Valley Bible Institute, kwiKholeji yamaKhosi yamazwe ngamazwe kunye neYunivesithi yaseFaulkner. Uyenze umsebenzi wobuvangeli kwiiCaribbean Islands naseMpuma Yurophu. Ufundisa ngokubanzi kunye nokushumayela e-Ukraine minyaka yonke. Uyashumayela ezintlanganisweni ezine kwiintetho zeendaba ezintandathu ngonyaka kwaye uthetha ngoqeqesho lobuzalwana kunye neeminina. Ungumqondisi-co-co we-Morgan County ngeveki eMaywood Christian Camp eHamilton, AL kwaye ukhonza kwibhodi ecebisa. Usebenza ngokusondeleyo kunye nenkqubo yeeLads kwiNkokeli.
Amanqaku asixhenxe Othando!
KuThixo makube yizuko-Izinto ezinkulu ezenzileyo!
Isizathu Sokuba Sinoyike UThixo!
Indlela yokwakha iSonto eliqinileyo laseKhaya!